स्वर्गद्वारीमा कांग्रेसको भेला, अब के होला ? | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
स्वर्गद्वारीमा कांग्रेसको भेला, अब के होला ?
मंसिर १, २०७५ शनिबार १६:५९:१७ | माधवकुमार ओली
रोल्पा – नेपाली कांग्रेस ५ नम्बर प्रदेश अन्तरगत १२ जिल्लाका सभापतिहरुले देशमा हत्या–हिंसा बढिरहेको भए पनि सरकार रमिते भएर हेरिरहेको आरोप लगाएका छन् ।
कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरुको प्यूठानको स्वर्गद्वारीमा भएको भेलामा यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन् । सरकार गठन भएको ९ महिनको अवधिमा नागरिकका अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य समाग्रीमा महंगी बढेको तर सरकारले महंगी समस्याको समाधान नगरेको उनीहरुले निष्कर्ष छ ।
देशमा बलात्कार, हत्या हिंसाजस्ता घटना बढी रहँदा पनि सरकार रमिते बनेको कांग्रेसको दाबी छ । सरकारले देशमा शान्ति अमनचयन बनाउनुको साटो दोषीलाई संरक्षण दिइरहेको आरोप कांग्रेसको छ । भेलाले पाँच नम्बर प्रदेशको स्थायी राजधानी र नाम छिटै टुंग्याउन प्रदेश सरकार समक्ष आग्रह गरेको छ ।
स्थानीय तहले विभिन्न बहानामा सर्वसाधारण नागरकमाथि चर्को कर असुलिरहेको समेत कांग्रेसले निष्कर्ष निकालेको छ । साथै सभापतिहरुको भेलाले तत्काल जनविरोधी कामलाई रोकेर शान्ति, सु–व्यवस्था कायम गर्न सरकार समक्ष माग गरेको छ ।
दुई तिहाईको समर्थन भएको सरकारले नागरिकको आशा र अपेक्षामाथि तुसारापात गरेको कांग्रेसको ठहर छ । कांग्रेसले पार्टीलाई माथि ल्याउन गाउँ–गाउँमा संगठन बिस्तार गर्नुपर्ने पनि निष्कर्ष निकालेको छ ।
भेलाले अस्वस्थ अवस्थामा रहेका रुपनदेहीका पार्टी सभापति एवं पूर्व राज्यमन्त्री अब्दुल रजाक गडीगको स्वास्थ्य लाभको कामना समेत गरेको छ । स्वर्गद्वारीको विकासमा समेत अग्रसर हुने भेलाले निर्णय गरेको छ ।